COVID-19 खोप सम्बन्धी जानकारी - ल्यान्कास्टर स्वास्थ्य केन्द्र COVID-19 खोप सम्बन्धी जानकारी - ल्यान्कास्टर स्वास्थ्य केन्द्र
हामी अब खोप लगाइरहेका छौं सबै वयस्कहरू जो १ 18 र माथिका छन्। * हाम्रो एक केन्द्रमा अपोइन्टमेन्टको लागि कल गर्नुहोस्:
»न्यू हल्याण्ड: 717-351-2400
नयाँ - पप-अप खोप घटना:
»मिति: शनिबार, अप्रिल २ 24
»स्थान: युनियन कम्युनिटी केयर, 625२ South दक्षिण ड्यूक स्ट्रिट, लन्कास्टर
»समय: am बिहान pm अपराह्न
» बिरामी र समुदायका लागि खोल्नुहोस्। 717१299-२6371-XNUMX Call कल गर्नुहोस् एक अपोइन्टमेन्ट निर्धारित गर्न।
* हाल Moderna खोप प्रस्ताव गर्दै
COVID-19 खोपहरू - तथ्य र लाभहरू:
COVID-19 खोप साइड इफेक्ट:
खोप पछि, तपाईं केही फ्लू जस्तै साइड इफेक्ट हुन सक्छ। यसको मतलब यो होइन कि तपाईं बिरामी हुनुहुन्छ - यो संकेत हो कि तपाईंको शरीरले सुरक्षा निर्माण गर्दैछ र भाइरससँग लड्न तयार हुनेछ!
धेरै व्यक्ति आफ्नो दोस्रो खुराक पछि थोरै शक्तिशाली साइड इफेक्ट महसुस गर्दछन् यदि यो २ खुराक खोप छ। ओभर-द-काउन्टर दुखाइ राहत औषधि यी साइड-इफेक्टको साथ मद्दत गर्न सक्छ।
अधिकांश व्यक्तिहरूले आनन्दित, स्वस्थ, र २ %--100 घण्टा पछि १००% फिर्ता महसुस गरेको रिपोर्ट गरेका छन्!
खोप प्रभावकारिता: Moderna र फाइजर खोपहरू COVID-94 बाट बिरामी हुनबाट रोक्नको लागि weeks 96-19%% प्रभावकारी छ तपाईले दुई हप्ता पछि प्राप्त गर्नुभयो दोस्रो शट। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, उनीहरू र दुबै 100% तपाइँलाई अस्पताल भर्ना वा मृत्युबाट रोक्न प्रभावी।
तपाईंलाई केवल एउटा शट चाहिन्छ!
खोप प्रभावकारिता: Janssen भ्याक्सिन तपाईको शट प्राप्त गरेको दुई हप्ता पछि %२% प्रभावी छ। सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, Moderna र फाइजर जस्तै, यो हो 100% तपाइँलाई अस्पताल भर्ना वा मृत्युबाट रोक्न प्रभावी।
खोप परीक्षणहरू: जानसेन भ्याक्सिन परीक्षणहरूमा अधिक विविध सहभागीहरू थिए जो हिस्पैनिक / ल्याटिनो र कालो वा अफ्रीकी अमेरिकी को रूप मा चिन्न सकिन्छ। यसमा participants० बर्ष भन्दा बढि उमेर र एक भन्दा बढि मेडिकल अवस्था भएका बढी सहभागीहरू पनि थिए। परीक्षणहरू ती स्थानहरूमा पनि गरिएका थिए जहाँ केही नयाँ संस्करणहरू परिभ्रमण गरिरहेका थिए, र अझै पनि अस्पताल भर्ना र मृत्यु रोक्न पूर्ण प्रभावकारी थियो!